Halkee si ay ugu dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha In Europe | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Halkee si ay ugu dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 08/01/2021)
cayaaray dawacooyin, gisi, oo duulaya doofaarro. Haa, Doofaaro! Dabaal The Year of Doofaar ka, Dabaal Chinese sanadka cusub ee Europe!
Chinese sanadka cusub, sidoo kale loo yaqaan Spring Festival ama Year New Lunar, waa dhacdo ugu muhiimsan ee kalandarka Chinese. Waxaa munaasabadda gaar ah calaamadeeyo qoyska Kulanno, cibaadaysi cuntada, qurbaannada at macbudyo, iyo - dabcan - rashka. Waxaa jira wax gaar ah u dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Europe. Waa fursad gaar ah in ay ka qayb ah dhaqan Chinese qadiimiga ah, shukaansi dib 4000 sano. Ha ka maqnaan aan ka bixin marka aad leedahay fursad!
No.1 loogu dabaaldego Sanadka Cusub ee Shiinaha in Europe | Madrid, Spain
Tirada dadka ku nool Shiinaha Spain ayaa ku koray aad u sannadihii la soo dhaafay, iyo kordhinta this ka muuqatay heerka dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha ee dalka. in 2019, waxba kala duwan filan.
Waayo, sannaddii saddexaad orodka, caasimada Spain waa meesha ay u dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Yurub ee Spain, barnaamijka dhaqan iyo dabaaldeg by Safaaradda Shiinaha abaabulay. riwaayada, weydaarsi, maraan wadada, iyo wadooyinka gastronomic guriga ee Madrid ee Chinatown - oo dhan qayb ka mid ah xaflado lagu qabtay degmada Usera waxay noqon doontaa.
Paris magaaladanuna ma aha magaaladii ugu horeysay ee aad ka fikirto marka fekerayo meel si ay u dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Europe. Laakiin tani sixir taataabtay magaalada jirsado magaalada dabaal Shiinaha inta lagu jiro damaashaadka galay.
Paris ma ahan oo kaliya maraan oo ku saabsan olaga iyo qurxinta baahsan, in kastoo. Its qarsoodi ah ugu wanaagsan-hayn muddo this waa laba macbudyo Buddhist ku yaal degmada 13-. Halkan qoysaska Shiinaha, Vietnam, iyo Cambodia u timid inaad bixiso xushmeeya iyo soo dhaweyn ee Sanad cusub. Ku raaxayso bannaanbaxyo of arts Chinese iyo farsamada, karinta, iyo ciyaar dhaqameed iyo music. Arag magaalada nalalka dhab ahaantii ku nool yihiin ilaa magaceeda hadda sannadkan. Iyo waxyaalaha ugu wanaagsan ee aad awoodid tareen safarka ka Paris si ay u Amsterdam oo u dabaal labada magaalo!
Dhab ahaantii Fun: Degmada caan Amsterdam ee Red-Light waxay hoy u tahay macbudka Buddhist dhabta ah. Sanadkasta, Aad u dabaaldegi karto Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Europe ee Amsterdam iyo hareeraha The Fo Guang Shan wuxuu Hua oo leh barnaamij gaar ah.
Tani waxay qayb ka mid ah magaalada ay sidoo kale waa weyn yahay haddii aad leedahay degto ah cunto Chinese dhab ah. naftaada Midhadh hadhuudh ah ee caanka ah Fiiri Palace (marka hore sabayn makhaayad Chinese Yurub) ama mid ka mid ah maqaayadaha badan Chinese at Geldersekade ah.
ee la soo dhaafay Chinese sanadka dabaaldeg New in Europe | England
London England qaadataa iyo kibirka ku faana in uu haystaa habka dunida ugu weyn si ay ugu dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Europe, ka baxsan Asia. Sidaas, Dabcan, tani waa mid lagu garaacayo markaad ku Dabaaldegayso Sannadka Cusub ee Shiinaha Yurub.
magaaladan waxaa heysta hal maalin Dabaaldag buuxda ka buuxaan hawlaha ay ka mid yihiin cunto dhaqameedka, parade sanadlaha ah, bandhigyo, iyo farsamooyin dhaqameed. (Waxaad naga lahaa at cunto dhaqameed!) na Tiri in!
Waxa England ka jira saddex meelood oo waaweyn oo xafladahaas lagu qabto; Trafalgar Square, Magaalada Chinatown, iyo Wadada Shaftesbury. Mid kasta oo u gaar ah hawlaha gaarka ah iyo dhacdooyinka ay bixiyaan; Kooxda martida ah waxay yeelan doonaan doorashada adag markii taas oo ay u sameeyaan.
Chinatown waxay bixisaa ugu wanaagsan ee ugu fiican marka la eego cunto dhaqameed. Hubi in aad hore ballan si loo sugo miis ka mid ah dad badan oo ku maqaayado heer sare ah. Chinatown uu ku sharraxnaan jirtay baxay ee ugu heer sare ah qurxinta iyo siraaddo cas nasiib iyo calammo. kooxo qoob ka Chinese iyo qaab lagu helay dhigay kartaa ilaa on marxaladaha badan oo dhan. London laga yaabaa cusub si ay goobta Sannadka Cusub ee Shiinaha, laakiin sanad walba ayaa noqonaya mid ka weyn oo ka wanaagsan oo aynu Ma sugi karo inaan arko waxa dhaca 2019!
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loogu dabaaldego Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Yurub oo loo tago mid ka mid ah magaalooyinkan? by tareenka, Dabcan! Isticmaal SaveATrain inay jartaan heshiiska ugu fiican daqiiqo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-chinese-new-year-europe%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#chinesenewyear #yearofthebpig europetravel longtrainjourneys tareen safarka safarka tareenka travelamsterdam travelfrance